Oniversite Ankatso: porofoin’ny Sinoa fa anisan’ny tanjany ny kolontsainy | NewsMada
Oniversite Ankatso: porofoin’ny Sinoa fa anisan’ny tanjany ny kolontsainy
Voalaza, matetika, fa faralahin-draharaha ny tontolon’ny kolontsaina. Fotoana izao hamadihana ity sehatra ity ho andrin’ny fampandrosoana. Porofon’izany ny fitazonan-dry zareo Sinoa ny maha izy azy, manoloana ny fanatontoloana, izay nitondra azy ho anisan’ireo firenen-dehibe, ankehitriny.
Anisan’ny mpitarika eo amin’ny fampivoarana hatrany ny teknolojiam-pifandraisana, matanjaka eo amin’ny sehatry ny asa vaventy, iray amin’ireo voalohany amin’ny indostria sy ny varotra eran’izao tontolo izao… Santionany ihany ireo raha hiresaka ny fandrosoana entin-dry zareo Sinoa. Ao ambadik’ireo rehetra ireo, firenen-dehibe mitàna hatrany ny maha izy azy sy ny kolontsainy i Sina.
Hita taratra izany amin’ny “Andron’ny kolontsaina sinoa”, tanterahina omaly sy androany, eny amin’ny trano famakiam-bokin’ny Oniversiten’Antananarivo. Hetsika fanaon’ny masoivoho sinoa, monina sy miasa eto amintsika, isan-taona izy ity ary hampahafantarany ireo singa tsy afa-misaraka amin’ny andavanandrom-piainan’ny Sinoa, ireo mamaritra ny maha izy azy, raha mitaha amin’ny hafa.
Taorian’ny kabary nifandimbiasana, omaly tamin’ny fanokafana ny hetsika, nifandimby niaka-tsehatra ny tanora malagasy sy Sinoa, naneho ny kolontsain’ity firenena aziatika ity. Nisantatra izany ny “wushu”, tsy hoe karazana haiady fotsiny fa toe-tsaina na filozofiam-piainana. Nanaraka izany, avy eo, ny karazana dihy nentim-paharazana, nolalaovin’ny tanora roa (lahy sy vavy), izay maneho tantara: hita amin’ny fihetsika sy ny endrika entin’ny tsirairay ary ny fitafy. Nodimbiasan’ny hira sy mozika izany, avy eo.
Mikasika izay indrindra, anisan’ny manaitra amin’ny fampirantiana, tanterahina eny an-toerana, ny karazan-javamaneno mampiavaka an-dry zareo Sinoa. Mitovitovy amin’ny valihavata izy ity, saingy miisa 21 ny tadiny na “cordes” ary hafa ihany koa ny feony, toy ireny fandre amin’ny horonantsary sinoa ireny.
Ankoatra ireo rehetra ireo, heverina fa efa fantatry ny maro ny fomba fiakanjo sinoa sy ny “calligraphie” na irony soratsoratra sy sary hosodoko irony. Manampy izany ny karazana kilalaon-tsaina fanao mandritra ny “festival des lanternes”. Ity hetsika ity koa dia mampiavaka an-dry zareo Sinoa.
Notsiahivin’ny ambasadaoro sinoa eto amintsika, Yang Xiaorong, tamin’ny lahateniny omaly, fa efa 47 taona izao ny fifandraisana diplaomatika eo amin’i Madagasikara sy i Sina. Marobe ny zava-bita tao anatin’izany, toy ny fotodrafitrasa samihafa. Eo koa ny fijoroan’ny toeram-pianarana teny sinoa, eny Ankatso sy any amin’ny Oniversiten’i Toamasina. Ankoatra ny fampirantiana, mitohy amin’ny fandefasana sarimihetsika sinoa ny fandaharam-potoana, androany, eny Ankatso.